Manopy Fijery Any Pôlônina: Fotoana Fanamboarana Pączki · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraJordan & Maria Seidel
Voadika ny 24 Jolay 2017 11:40 GMT
“Dônaty Poloney” sary an'i Polska＊ポーランド＊Poland
Farafahakeliny fotoana iray mandritra ireo andro maizina rehefa ririnina, mamy ny miaina ao Pôlônina. Manamarika ny Alakamisy farany mialoha ny Karemy, ny Tłusty czwartek (na Fat Thursday) izay andro iray mahalafo vidy ny vatomamy.
Ny Alakamisy talohan'izao, tanaty tontolo mampahatsiahy ireo andro fahinin'ny kaominista, rakotra olona nilahatra hahazo ny anjara zavamaminy sy marik'io andro manandaza manokana io, ary tsy misy manelanelana fa avy dia any am-potony, ireo toerana fivarotana vatomamy tao an-toerana sy ireo mpanao mofo – ny dônaty fanaon-drazan'ireo Poloney, na pączki. Saingy indrisy fa vetivety foana dia lany daholo sahady ny tao amin'ireo mpanao mofo tao an-toerana!
Fahita mahazatra ao Pôlônina rehefa Alakamisy Matavy, Wikipedia
Mahaliana, samy manana ny fombany manokana ny firenena tsirairay mba hanamarihana ny andro farany mialoha ny Karemy: any Gresy, tsy vatomamy, fa hena no tena betsaka hanin-dry zareo rehefa Tsiknopempti. Any Amerika Latina sy Atsimo, fomba mavitrika kokoa no ankalazan-dry zareo azy miaraka amin'ny Karnivaly.
Ary mba ahoana no fomba fankalazan'ny firenenareo ny fotoana farany mialoha ny Karemy? Mipetraka any aminà toerana iray fivarotana zavamamy ve ianareo ary miletra ireo zava-mahafinaritra ataon'ny mpanao mofo sa mandeha midina eny an-dalambe?